अन्यायमा परेका छन् महादेव ! :: सृजना पोख्रेल :: Setopati
महादेवले कति हो कति दिनसम्म निराहार व्रत बसेर पार्वतीलाई पाएका रहेछन्। तीज यदि व्रत बसेर आफ्नो प्रेम पाएको खुसीमा मनाइने चाड हो भने, महिलाभन्दा कठोर व्रत त पुरुषहरू बस्नुपर्ने होइन र?
गरेको प्रेम अनि पाएको प्रेम, जहाँ दुवै पूर्ण हुन्छ, सायद त्यो नै पूर्ण प्रेम हो।
उसो हो भने मेरा लागि सतीदेवी सबभन्दा सफल प्रेमिका हुन्। उनको जस्तो प्रेम कसले पो गर्‍यो होला र! उनले जसरी प्रेम कसले पायो होला र!
सती अर्थात् पार्वती। पार्वती भनेकै सती। कवि कालिदासले लेखेको यति पढ्दै थाहा हुन्छ:
'र यसरी ती सती, जो महादेवकी पत्नी थिइन्,
जसले आफ्ना पिताको उपेक्षा सहन नसकेर पवित्र अग्निमा आफ्नो देह अर्पण गरिन्,
ती गुणी सती, अन्ततः पुनर्जीवित भएर मेनकाको गर्भमा बसिन्।'
-कुमारसम्भव, सर्ग १, उपसर्ग २१।
सतीदेवी र उनको प्रेमलाई सायद धेरैले बिर्सिसके। तर एउटै आत्मा बोकेर जन्मिएको भएर होला, कम्तीमा पार्वतीलाई चाहिँ सम्झिएका छन्। अहिले हामीसँग पार्वतीको प्रेम गाथा गाएर उत्सव मनाउने पर्व नै छ- तीज।
झट्ट सम्झिँदा तीज भनेपछि दर, दुःख, नाच अनि भोको पेट याद आउन सक्छ। तर तीजको स्रोतले यसलाई पार्वतीको प्रेम, तपस्या, समर्पण अनि भक्ति सम्झाउने महान चाड हो भन्छ।
यो महान चाड तीज रसिलो भएर पनि चिनी नपुगेको सर्वतजस्तै छ। हामीले सुन्ने तीजका कथा अनि गीत, एकोहोरो पाक्ने रोटीजस्तै भए। हामीले घिन्ताङ घिन्ताङ मादल घन्काउँदै गीतहरूमा पार्वतीको प्रेम त गायौं तर महादेवको प्रेम बझ्ने कुनै गीत गाएनौं।
पार्वतीको प्रेमलाई पुज्दा पुज्दा, व्रत बस्दा बस्दा तीजले हजारौं जन्मोत्सव काटिसक्यो। रोटीको एउटा भाग पाकेर खान ठिक्क हुने मिठो भइसक्यो। तर महादेव, जसको प्रेम पाउन व्रत बसिएको हो, उनैले पार्वती/सतीलाई गरेको प्रेमको न पर्याप्त महिमा छ, न सिको गर्नलाई चाड।
रोटीको अर्को भाग जहाँ महादेवको प्रेम छ, त्यो त्यति नै मीठो बन्न सक्छ तर पाक्नै पाएको छैन।
शिव पुराण, अध्याय २८ मा उल्लेख छ- एकदिन सतीदेवीलाई थाहा भयो, दक्षप्रजापतिले सम्पूर्ण देवीदेवता बोलाएर भव्य यज्ञ गर्दै छन्। महादेव-सतीलाई मात्र निम्तो आएको थिएन। तर निम्तो नआउँदा पनि सतीदेवीले दक्ष-यज्ञमा जान मन गरिन्।
पहिले त महादेवले, 'सती, हामीलाई त्यहाँ बोलाइएको छैन। नबोलाएको ठाउँमा जानू कुनै स्वाभिमानीको लागि मर्नु समान हुन्छ' भन्दै रोक्न सक्दो प्रयास गरेका थिए।
तर यज्ञमा जानु सतीको इच्छा थियो। अनि महादेवका लागि सतीको इच्छाको कदर गर्नु सबभन्दा ठूलो धर्म। उनले आफूलाई सही नलाग्दा नलाग्दै पनि खुसी खुसी सतीलाई शिवगणसहित दक्ष-यज्ञमा पठाए। महादेवले आफ्नी अर्धाङ्गिनीको इच्छा आफ्नो घमन्डभन्दा माथि राखे। यस्तो थियो महादेवको प्रेम!
महादेवलाई जितेर माइत पुगेकी सतीले पुग्नेबित्तिकै आफ्ना पतिलाई, 'सन्की', 'कुलहीन', 'नसामा धुत्त रहने बौलाहा' भन्दै अपमान गरेको सुन्नपर्‍यो। सती आउन त बाआमाको अँगालो, काख सम्झेर आएकी थिइन्। तर पुगेर जे सुनिन्, त्यसपछि उनका आँखाले त्यो यज्ञ मात्रै देखे जसले अँगालो फैलाएर उनलाई हेरिरहेको थियो।
उनी यज्ञकै काखमा पुगिन्।
सतीदेवीको निर्णयलाई आफूभन्दा माथि राखेर उनलाई रोक्न नसकेका महादेव जब दक्ष-यज्ञमा पुगे, तब सतीको सास नै रोक्किसकेको थियो। सतीको साससँगै संसार संहारकर्ता महादेवको संसार रोकियो।
खुसीले सब थोक बिर्सिएर प्रेम गरिरहेका महादेवले सती गुमाएपछि साँच्चै सबै थोक बिर्सिए। सती उनकी आँखा थिइन्। आफ्नो आँखालाई आधी जलेको देखेपछि महादेवका आँखाले बाँकी नजलेको दुनियाँ देख्नै छाडे।
'हा सती! हा सती!' भन्दै उनी होस गुमाएर हिँडे। सतीको लास एक-एक गल्दै एकाउन्न टुक्रामा खसिसक्दा पनि थाहै पाएनन्। त्यो लास शून्य हुन्जेल कति भोकै बसे होलान् उनी! कति पानी नखाई हिँडिरहे होलान्! कति लामो व्रत थियो होला त्यो!
पहिलो जन्ममा सतीदेवीलाई गुमाएपछि यसरी निराहार व्रत बसेकाले होला, महादेवले अर्को जन्ममा पार्वती पाएका। तथापि आज जगतले, प्रेम पाउनका लागि व्रत बस्नेलाई मात्रै सम्झिन्छ। मानौं प्रेम गुमाएर भोकै बस्नु व्रत होइन। मानौं यो प्रेमकथामा महादेवको प्रेम नै थिएन।
हामीले अधूरा, असफल प्रेमकथालाई मात्रै अमर कथा भन्न सिक्यौं। राधा-कृष्णलाई त प्रेमका प्रतीक मान्यौं तर सफल अनि पूर्ण प्रेम बाँचेका सती-शिवलाई बिर्सियौं।
महादेवले शरीर बलियो बनाएर राक्षस मारेका कथा बचायौं, उनले मन नरम राखेर गरेको प्रेमको कथा बचाउन सकेनौं।
हो, हरेक वर्ष तीजमा महादेवकै पूजा हुन्छ। तर सबैले आफूलाई भोको पेट पुजिरहँदा पनि उनी चाहिँ 'एकातिर नपाकेको रोटी' जस्तै अनुहार बनाएर बस्छन् होला।
प्रेम गर्नेहरूलाई आफ्नो पूजा होइन, आफ्नो प्रेमको पूजा र प्रशंसा प्यारो हुन्छ। हर कोही प्रेमीलाई लाग्छ, उसले लेखेको प्रेम बाँच्ने धेरै होऊन्। उसको प्रेमकथा बाँच्ने धेरै होऊन्। महादेव पनि प्रेमी न थिए।
अफसोच! महादेवको प्रेम, अहिले अनेक नाम गरेका 'महादेव' हरूमा बाँच्न पाएन। नारीलाई पार्वतीको प्रेम सिको गर्न तीज छ। तर पुरुषलाई महादेव प्रेमको उत्सव मनाएर सिको गर्न कुनै चाड छैन।
लोग्ने मान्छेको मनमा पनि प्रेम त हुन्छ, अथाह हुन्छ। तर त्यो प्रेमले देखिने मौकै पाउँदैन।
यो महादेवबाटै सुरू भएको अन्याय हो। अहिले तीजले प्रेम गर्ने सबै पुरुषलाई अन्याय गरेको छ।
दुःखको कुरा, अहिले अन्याय हुने प्रायः प्रेमी पुरुषलाई आफूलाई अन्याय भएको थाहै छैन। पहिले अन्याय हुने हाम्रा आमा-हजुरआमालाई आफूलाई अन्याय भएको थाहा नभएजस्तै।
अन्याय थाहा नहुनेहरू न्यायका लागि बोल्ने कुरै आएन। थोरै मात्रै छन् जसलाई थाहा छ, केही गडबड छ। अनि बोल्ने हिम्मत पनि छ।
उनीहरूको आवाजले भन्छ-
-सती र शिवको कथा के शिवको प्रेम बिना सम्भव हुन्छ?
-एउटा सम्बन्धमा दुई जना हुन्छन् भने, दुई बीचको प्रेमले दुई जनाकै मुटु नाच्छ भने, त्यो प्रेम देखाउन दुवैले बराबर साधना गर्नुपर्ने होइन र?
-दुई आत्माको मिलन हुन भोको पेट नै चाहिन्छ भने, दुइटै पेट भोका हुनुपर्ने होइन र?
बिडम्बना, यी आवाज हावासँग ठोक्किएर बाहिर पुग्नेबित्तिकै धर्मविरोधी ठहरिन्छन्। हरियो डलरले पुरिएर परम्परा नास गर्न आएका आतंकवादी मानिन्छन्। अनि प्रायः आफैं हावामै बिलाउँछन्।
तर को धर्मवादी हो र को धर्मविरोधी भनेर वर्गीकरण गर्ने जागिर खाएकाहरूले एउटा कुरा ख्याल गरेनन्- हाम्रो धर्म ती जागिरे डराए जसरी कसैले विरोध गर्दैमा बर्बाद भइहाल्ने गरी कमजोर छैन। बरु हामीले थोरै बुझाएर, थोरै सिकाएर अनि थोरै सुधारेर विरोध गर्नेलाई 'वाह' गर्ने बनाउन सकौं, हाम्रो धर्म त्यति बलियो चाहिँ छ।
धर्म छेउमै राखेर विज्ञानलाई मात्रै हेर्नेहरू पनि भन्छन्- समय मिलाएर व्रत बस्नु शरीरका लागि फाइदाजनक हुन्छ।
चिकित्सक डा. भगवान कोइरालाले पनि सेतोपाटीमा प्रकाशित लेखमा उचित तरिकाले व्रत बस्नु स्वास्थ्यका लागि कति फलदायी हुन्छ भने छर्लंग पारिदिएका छन्। हाम्रो धर्म रूढीवादी मात्रै होइन, स्वास्थ्यवर्द्धक पनि रहेछ।
त्यसैले, हामीलाई हाम्रो संस्कृति यी विरोधीले बर्बाद पारिदिन्छन् जस्तो लाग्छ भने बरु अब महादेवलाई खुसी बनाइदिऊँ। तीज महिलाकै चाड मानौं, हाम्रो परम्पराको सार भत्किन नदिऊँ।
तर पार्वतीको प्रेम मनाउँदै श्रीमतीले आफ्नो दीर्घायुका लागि व्रत बस्दा श्रीमानले भनिदिऊन्, 'म पनि महादेवको प्रेम सम्झेर तिम्रा लागि व्रत बस्छु।'
पार्वतीले महादेव पाउन गरेको तपस्याको सिको गर्दै आफ्नी प्रेमिकाले व्रत बस्दा प्रेमीहरूले भनिदिऊन्, 'मलाई पनि त तिमीलाई पाउनु त्यतिकै महत्त्व छ। सँगै एकअर्कालाई पाउन व्रत बसौं न!'
यदि व्रत बसेर जीवनसाथीको आयु बढ्ने रहेछ भने दुवैको बढ्छ। होइन, व्रत बसेर स्वास्थ्यलाई फाइदा मात्रै गर्ने रहेछ भने पनि दुवैलाई फाइदा गर्छ।
हामी अहिले 'हिन्दु धर्म बचाऊँ' भन्दै प्रचार गरिरहेका छौं। हाम्रो धर्म कति वैज्ञानिक छ, पश्चिमाको सिको नगरौं भनेर बुझाउन खोज्दै छौं। त्यही बुझाउन खोज्नेहरूले मात्रै पनि श्रीमती-प्रेमिकालाई व्रतमा साथ दिए पुग्छ।
कुनै पुरुषले आफूलाई पूजनीय पति 'देव' नसोची श्रीमतीको दुःख बाँड्ने जीवन 'साथी' सोचेर धर्म जोगाउन चाहे भने कोही विरोधीले कम्तीमा असमानताका नाममा कहिल्यै तीजको विरोध गर्ने छैनन्।
आफ्नो धर्म, चलन मान्नेजति सबैलाई प्यारो हुन्छ। जोगाउन खोज्नु सामान्य हो। तर खोट लाउनेलाई गाली गरेर बचाएको भन्दा, खोट मेटाउन कोसिस गरेर जोगाएको कुरा धेरै सुन्दर बाँच्छ।
मलाई बेलाबेला लाग्छ- महादेव अनि पुरुषहरूलाई अन्याय भएको छ। उनीहरूलाई मात्र होइन केही त हिन्दु धर्मलाई पनि अन्याय भएको छ। अहिले हिन्दु धर्मको पवित्र सार, केही विषालु झाडीको बीचमा टाढा कतै फलेको आँपको रुख जस्तै हो। पितृसत्ताले त्यो रुख वरपर झार लगाएका छन्। अनि अपव्याख्याले मलजल गरेर ती झार झन् धेरै झाँगिए। यसरी झाँगिए, अहिले झाडीभन्दा पर बस्ने अवोध मान्छेलाई त्यो आँपको बोटमा फल नै छैनन् जस्तो लाग्छ। चोप अनि चिल्ने राता कमिला मात्रै छन् जस्तो लाग्छ।
त्यो रुखमा फलहरू छन् तर रुखको वरपर झाडी पनि छन्। कति झार विषालु पनि छन्। रुखमा राता कमिला पनि होलान्। एकथरि मान्छे छन् जो टाढाबाट विषालु झार मात्रै देखेर आँपको रुखसम्म जानै चाहँदैनन्। अनि अर्कोथरि छन् जसलाई झाडी मास्नुपर्ने छ कि जस्तो नै लागेको छैन। उनीहरूलाई त ती विषालु झाडी रुखलाई बचाउन फुलेका सुन्दर फूल लाग्छ।
दुई जीवनसाथीलाई बराबर नमानी एउटालाई भगवान अनि अर्कोलाई दासजसरी अर्थ लगाउँछन् केही। साथीलाई भगवान मानेर उसको खुट्टाको पानी खानू भनेको चिल्ने राता कमिला होलान्। साथीले नसक्दा पनि 'भोकै बस्' भनेर कर गर्नू विषालु झार होला। तर एकअर्कालाई गर्ने प्रेमको उत्सव मनाउनू, आफूले गरेको प्रेम देखाउन पाउनू, त्यो रुखमा फलेको स्वादिलो आँप हो। त्यो आँप संसारकै सबभन्दा स्वादिलो फल हो सायद।
चोप र राता कमिला मात्रै छन् सोच्नेहरूले जबसम्म झाडी पन्छाएर रुखसम्मको बाटो बनाउँदैनन्, आँपले आफ्ना मिठा फल देखाउन पाउने छैन। अनि रुखको सुन्दरता देखाउन चाहनेले जबसम्म वरपरका विषालु झार उखेल्दैनन्, आँपले आफ्ना मिठा फल देखाउन पाउने छैन।
पहिले वरपर झाडी छ भनेर स्विकार्नु पर्छ। ती झार उखेल्नुपर्छ। राता कमिला फाल्नुपर्छ। अनि आँप आफैं भेटिन्छ।
हामीले सुधारेर नबचाए, हाम्रो सुन्दर धर्मलाई कीराले खान सक्छन्। हामीले टिपेर नखाए, त्यो स्वादिलो आँपलाई कीराले खान सक्छन्।
अनि जब जब हामी भोकै हुन्छौं तब कोही आउँछ र हामीलाई लोभ्याउँदै भन्छ, 'तिमीहरूको आँप त कुहिएको छ। लेऊ, यो नयाँ फल खाऊ।'
(सृजना पोख्रेलका लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २८, २०७७, ०७:५५:००
प्रधानन्यायाधीशलाई बिदामा बसेर कार्यबाहक तोक्न गठबन्धनको सुझाव
कांग्रेस महाधिवेशन: लुम्बिनीका जिल्ला सभापतिमा पौडेल पक्षको वर्चश्व
मतदातामै अड्कियो राप्रपा महाधिवेशन
विद्यार्थीलाई खाली खल्ती एक हप्ताको साइकल यात्रामा पठाउने विद्यालय
राप्रपाको चुनावी प्रक्रिया आजबाट सुरू, अध्यक्षमा थापा र लिङ्देन भिड्दै
राप्रपा अब कहिल्यै फुट्दैन : अध्यक्षत्रय
थापा र लिङ्देनलाई मिल्न ‘दबाब’, दुबै भएनन् टसमस
विन्टर ओलम्पिक्स खेल्न छैनन् नेपालसँग खेलाडी
कोरोनाको नयाँ 'ओमिक्रोन भेरियन्ट' कस्तो, नेपाल कति जोखिममा?
नेता खोजिरहेको नेपाल, कांग्रेसमा को?
'शरीरले मागिराछ, मेन्टल्ली हानिराछ'
हामीसँग न चीन, न भारत!
पुसमा खेलिने जुम्लाको भैलो, भन्छ कर्णालीको कथा (भिडिओ)
नेपालको विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई एकैक्षण नियाल्दा सर्मिला तन्डुकर
के हो सिकलसेल रोग? हेमराज शर्मा